Tsvaka mishonga panzvimbo yedu yepaiti
YEMAHARA YEMAHARA SARMS YAKATUMIRWA MUNYIKA YOSE
PCT & CYCLE RUBATSIRO
Sarms USA 2021
Mamiriro Epamutemo EmaSARM MuUSA - Tenga MaSARM Ari Kutengeswa
Pakave paine kusagadzikana kwakakwana mupfungwa dzevanogadzira muviri kana zvasvika pamamiriro epamutemo emaSARM muUSA. Kuwanikwa kwe Selective Androgen Receptor Modulators (MaSARM) yaive shanduko kwazvo munyika yeanopokana-kuchembera uye sainzi yekurapa.
Nekudaro, iyi mishonga ine simba rakakurumidza kupinda mumatambudziko nemasangano ekuchengetedza mutemo nemamwe masangano nekuti kushandiswa kweiyi inovandudza mashandiro emishonga inopa mukana wakasiyana kune vashandisi. Izvi zvaingova zvimwe zvezvikonzero zvikuru zvikonzero nei zviremera zvakafunga kupedza mukurumbira mukuru weSARM muUnited States. Asi, vakabudirira here?
Ngatitsvagei nezve izvo zviri pamutemo uye zvehunyanzvi zvinhu zveSarudzo Androgen Receptor Modulators muUnited States. Izvi zvichatibatsira kuwana mhinduro dzemibvunzo yakajairwa: MaSARM ari pamutemo here muUSA? Ndeapi mamiriro epamutemo e Selective Androgen Receptor Modulators muUnited States of America? Unogona kutenga maSARM ekutengesa online muUnited States?
SARMs Kudzora Mutemo Wa2018
Iyo bipartisan SARMs Kudzora Mutemo we2018 (S. 2742) yakaunzwa nemaSeneta eUS Sheldon Whitehouse (D-RI) naOrinrin Hatch (R-UT). Uku kwaive kuisa Selective Androgen Receptor Modulators mumutemo mumwe chete necocaine, meth, uye opiates. Yakapikiswa nevatsigiri vebhiri rekuti maSARM haana kuitiswa kumatambudziko emakiriniki.
Mune mamwe mazwi, kufamba uku kwaiitirwa kumisikidza chinzvimbo chezvinhu zvinodzorwa pane Selective Androgen Receptor Modulators. Icho chinangwa chaive chakanangwa nenzira yekuti masimba ekutanga ekumanikidza anogona kutamisirwa kubva kuUS FDA kuenda kuUnited States. Drug Enforcing Administration (DEA).
Izvi zvaizove zvakare zvakashandurwa kuti zviwedzere kuomarara kwechirango kune avo vakawanikwa vaine mhosva yekuita muKusarudza Androgen Receptor Modulators. Uyu mutemo wakatsanangurwa waive wakanangidzirwawo kune chero munhu ane chero huwandu hweSARM dzekushandisa wega. Chirango chakarongwa ndechekusungwa nekuvharirwa mutorongo semutadzi wezvinodhaka kuvanhu vari pasi pemitemo yemubatanidzwa
Ko iyo SARMs Kudzora Mutemo Inonyatso Shanda?
Nguva nenguva, vateereri vemitemo vakaedza kudzvinyirira "izwi chairo". Takazviona izvozvo nembanje yekurapa. Wese munhu aiziva kuti mbanje yekurapa ndicho chinhu chakanakisa kumbozivikanwa kuvanhu. Yakanga yakachengeteka ichienzaniswa nedoro, iyo inowanzoyemurwa kunyange nevamiriri vemitemo vari pachena.
Ngatitaurei zvino titarise zvakanyanya dzimwe nhamba dzinovhura maziso:
Maererano Ongororo yeZvenyika yekushandisa zvinodhaka uye Utano (NSDUH), 86.4 muzana yevanhu vane makore gumi nemasere kana kudarika vakataura kuti vakanwa doro pane imwe nguva muhupenyu hwavo. Zvakare, 18 muzana vakataura kuti vakanwa doro mugore rapfuura uye 70.1 muzana vakataura kuti vakanwa doro zvakanyanya mumwedzi wapfuura.
Iyo National Survey yekushandisa Zvinodhaka uye Hutano (NSDUH) yakashumawo kuti 15.1 mamirioni vakuru vane makore 18 zvichikwira vaive neAlcohol Use Disorder uye izvi zvinosanganisira 9.8 mamirioni evarume uye 5.3 mamirioni evakadzi uye nhamba idzi dziri kukura zuva rega rega.
Pagore, vanhu vanofungidzirwa kuti zviuru mazana masere vanofa nezvikonzero zvine chekuita nedoro muUnited States moga, izvo zvinoita kuti doro ive yechitatu-inotungamira inodzivirirwa chikonzero cherufu muUnited States nenzvimbo yekutanga neyechipiri inogarwa nefodya uye kudya kwakashata & kusaita basa, zvichiteerana .
Zvino chimbofungidzira izvi, chechitatu-chinokonzera chikonzero chekufa munyika iri zviri pamutemo chose. Zvakare, kirasi yemishonga yakasimbiswa nesainzi ine hutano hwakanakira yaive yakagadzirirwa kunzi haisi pamutemo! Zvinotyisa! Zvinoshamisa!
Yazvino Yemutemo Mamiriro EmaSARM MuUnited States-Maitiro Ekutenga MaSARM Ari Kutengeswa MuUSA
Iyo SARMs Kudzora Mutemo we2018 ichiri kupasiswa uye pane mikana mishoma kwazvo yekuti ichapasiswa chero nguva. Izvi zvinoreva kuti maSARM achiri kutariswa semishonga isiri pamutemo (sezvo yakatarwa SARMs Kudzora Mutemo uchiri kuzova mutemo). Zvinoreva kuti vanhu vanogona kutenga uye kushandisa Selective Androgen Receptor Modulators kuitira zviri pamutemo, kutsvagisa, uye zvemishonga zvinangwa. Nekudaro, ivo vanofanirwa kurega kubva pakutengesa, kutengesa zvakare, kugovera, kana kugovera zvakare iyi mishonga kuti vadzivise kusagadzikana kwepamutemo.
Kana iwe wanga uchironga kutenga maSARM ekutengesa kuitira zviri pamutemo kana zvekurapa, hapana kana chinhu chaunonetseka nezvacho. Tenga maSARM ari pamutemo izvozvi kubva kuchitoro chepasirose chakanyanya kufarirwa pasipasi kutenga Selective Androgen Receptor Modulators.
Kana iwe ukavhiringidzika nezve iyo SARM yekusarudza, tungamira wakananga kutenga kubva kuSARMs UK Store - nzvimbo yakanakisa yekutenga maSARM ari kutengeswa!
GW-501516Cardarine), inozivikanwa yekucheka kutenderera mushonga, ndeimwe yeakanakisa mashandiro ekusimudzira madhiragi ekurasikirwa nemitsipa yemimba uye visceral mafuta. GW-501516 inoshandisa mafuta sosi sosi uye inoderedza mafuta echiropa neanosvika makumi maviri muzana. Inoderedzawo mafuta eropa [(VLDL APOB ne20 muzana, triglycerides ne26 muzana, uye LDL ne30 muzana)]. Chechipiri kune chimwe chekuvandudza kutsungirira kwemoyo, Cardarine ndiye akakosha ekuvaka muviri kuwedzera muviri.
Imwe yehukuru zvakanakira Cardardine ndeyekuti haisi yekudzvanyirira uye isiri-mahormone. Izvi zvinoreva kuti kushandiswa kweiyi yekucheka kutenderera mushonga kwaisazotungamira mukusaenzana kwehomoni uye kuwanda kwesrogen kuumbwa kunoita kuti ive yakanaka kune vese varume nevakadzi. Cardarine inonyanya kurongedzwa naOstarine uye Nutrabol mukutenderera kwemasvondo gumi kusvika gumi nemasere.
Cardarine anoratidza kushanda kusingaenzaniswi kuchengetedza midziyo yehuropi kubva kukuvara kweiyo oxidative uye kushushikana. Zvakare, inoratidza zvakare kugona kukuru kwekusimudzira tsinga maseru kukura uye kuchengetedza kuyerera kweropa muuropi. Kushandiswa kweCardararine kunoenderanawo nekukosha kwekuvandudza maererano nemashandiro ebasa, kudzidziswa kwesimba, uye zvikamu zvecardio. Tenga Cardarine ikozvino nekusarudza maSARM UK Chitoro - nzvimbo yakanakisa yekutenga maSARM ari kutengeswa !!
Kana iwe uchitsvaga yakanakisa SARM kurasikirwa nemafuta emuviri uye kuwana mhasuru panguva imwe chete, inguva yekutenga Ostarine. Iyi inosarudza uyerogen receptor modulator pasina mubvunzo ichaita kuti maoko ako asakwanise kubata zvinorema triceps uye biceps. Ostarine, inozivikanwawo se Ostabolic, yakatanga kugadzirirwa kurapa kuparara kwemhasuru uye osteoporosis. Yakakurumidza kuwana mukurumbira senge kubhaiza kutenderera mushonga asi ichishandiswawo sekucheka kutenderera mushonga.
The kushandiswa kweOstarine inosanganiswa nekuvandudzwa kwakakura mumatanho emhasuru, tsananguro yemhasuru, uye saizi yemhasuru. Iyo zvakare inosanganisirwa nekuvandudzika mumatanho ekutsungirira uye pfungwa yehupenyu hwakanaka. Kwete izvi chete, Ostarine inobatsira vashandisi kushandisa macalorie akawanda pane akadyiwa ayo anoshandura kukurumidza kurasikirwa kwemafuta.
MK-2866 inozivikanwawo mukuvaka muviri uye nharaunda dzemitambo sezvo ichivandudza protein synthesis uye nitrogen kuchengetedza. Aya ndiwo ekutanga matombo ekuvaka emhasuru. Tenga Ostarine ikozvino kubva kumaSARM eK Store - nzvimbo yakanakisa yekutenga maSARM ari kutengeswa!
Ligandrol, inozivikanwawo seGGD-4033 uye Anabolicum, ndeimwe yeanonyanya kufarirwa kubvongodza maSARM pakati peamateur nehunyanzvi vatambi & vavaki vemuviri. Iyi inosarudza uyerogen receptor modulator inoshanda zvakanyanya kurapa yakasarudzika kurasikirwa kwerudzi rwechipiri mhasuru tambo.
LGD-4033 inobatsira zvakaenzana pakupa zororo kuvarwere vari kunetseka nezera-rine hukama nemhasuru uye kurasikirwa kwesimba. Inoshanda zvakafanana kune avo vanotambura nehurombo hwehupenyu, kudonha, uye kutsemuka. Izvo zvinobatsirawo kudzikisa kana kubvisa kurasikirwa kwekushanda kwemuviri uye mhasuru. Inogona kushandura zviri nyore kuremara uye kufamba kunokamirwa kunokonzerwa nemamiriro ehutano senge chisingaperi chirwere chepapu, mamwe marudzi ekenza, uye ekupedzisira-nhanho yezvirwere zveitsvo.
Ligandrol, iyo inoratidzirwa neyakareba inotenderera hafu yehupenyu, yechipiri kune imwe yekusimudzira kwakanyanya kuvandudzika mumatanho eperiosteal bone kuumbwa. Inovandudzawo matanho ezvepabonde, femur kukotama simba, uye bone mineral density. Ligandrol inoshandawo kuporesa nekusimbisa tendon, mapfupa, uye ligaments. Inogona kushandiswa nevarume nevakadzi mukukwikwidza, kucheka, uye kugadzirisa MaSARM anotenderera. Tenga Ligandrol zvino!
Testolone, iyo inozivikanwawo seRAD-140, isarudzo yakanaka kune chero munhu anoda kuenda nekukurumidza, akasimba, uye akakura! Kana iwe uchitsvaga iko kuita kwekusimudzira mushonga kuti ugare wakakwira pahutano hwese uye libido, Testolone isarudzo yakanaka kwazvo kwauri. Izvo zvinotozokubatsira iwe uchibvisa mafuta emuviri uye huremu panguva imwe chete. Yakanakira varume vane yakaderera testosterone mazinga, RAD-140 zvinoshamisa inowedzera kugona kubata kwakasimba kuvaka muviri kurovera, Cardio zvikamu, uye simba kudzidziswa. Iyi testosterone-inowedzera yekuwedzera inoshanda zvakaenzana kusimudzira kuvandudzwa kwemapuroteni nemaseru emhasuru mumuviri.
Testolone inoyemurwazve nevanovaka muviri nevatambi sezvo ichiwedzera pombi dzemhasuru uye kuzara. Icho chakanakisa kutsiva kwechinyakare testosterone kutsiva kurapa zvigadzirwa. Inowanzo gadzirirwa kuvarwere vane matambudziko ehutano seAIDS nekenza.Tenga Testolone zvino!
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, zvinokurudzirwa kuti utange wawana nzwisiso yakajeka uye izere nezve iyo Selective Androgen Receptor Modulators. Izvi zvakakosha pamberi pekutenga kwese kwemaSARM ari pamutemo. Izvi zvinongova nekuti maSARM zvinodhaka zvine simba zvakanyanya zvinofanirwa kutarisirwa nekutarisira kukuru uye nekushingairira. Uyezve, iwe unofanirwa kuzvichengeta iwe uchivandudzwa nemamiriro epamutemo emaSARM munyika yako kuti ugare wakadzivirirwa kumatambudziko epamutemo. Izvo zvine musoro kugara uchigara kurudyi kwemutemo kana iwe uchida kutenga maSARM ekutengesa.
Ini ndiri wekusimbisa muviri uye wekusimba wemuviri akatanga kunyora mablog zvichienderana nezviitiko zveangu. Munyori nehunyanzvi uye mushandi wemuviri nemoyo, ndinogona kukubatsira iwe kushandura muviri wako uve chimiro uye saizi iri nani. Mablog angu anogona kukubatsira kuwana mhinduro kumibvunzo yese yawanga uchitsvaga kana zvasvika pakushanduka kwemuviri. Ini ndinogona kukuudza iwe akanakisa ekuwedzera ekutarisisa kwakanyanya, mhasuru kuwana, kurasikirwa kwemafuta uye masiteki ekushandura. Verenga pamusoro pezvakanakisa kurudziro zvigadzirwa pamwe nezvakanakira uye mhedzisiro Kune chero mibvunzo iwe yaunogona kubatanidza kuburikidza neemail.
mugove Tweet kubayirira naro
Nei Uchishandisa Alpha Labs TLB-150 Kune Yako Workout
Chii chinonzi Laxogenin?
Post-kutenderera yekuvandudza kurapwa mushure maSARM
Chii chinonzi prohormones?
Chii chinonzi SR9009?
American Express Apple Pay Bancontact Bitcoin Diners Club Dogecoin EPS Giropay ZVINOKOSHA JCB Maestro Mastercard Multibanco PayU Przelew24 pakarepo vhiza WeChat Kubhadhara